OS-STORE 2013Q1 Dine Dinner Party – Thailand food restaurant | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
ဧပြီလ 30, 2013 admin ရဲ့ အသက်, သတင်း, OS ကို-STORE, အခြား 2
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ. thanks all member’s support, the first quarter of 2013 OS ကို-STORE still steadily growing. In the future, we will work harder to provide better service to everyone.
Intel® Xeon® E3 Family CPU Processor Products (ဆာဗာ)
Intel®Xeon® CPU ကိုပရို 7000 sequence ထုတ်ကုန်များ (ဆာဗာ)
ဇွန်လ 2, 2013 တွင် 3:20 ညနေ
မေ 31, 2013 တွင် 11:08 ညနေ
processor ​​ကို OS ကို-STORE ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် မိုဘိုင်းဖုန်း Nokia က 64-နည်းနည်းက Windows နည်းပညာ Samsung က HD Graphics HTC က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Intel က ပရိုဆက်ဆာ device ကိုမော်ဒယ် ဥပဒေရေးရာအနက် စီပီယူ Software များ Technology_Internet စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ
ဥပဒေရေးရာအနက် မိုဘိုင်းဖုန်း Samsung ရဲ့ Galaxy OS ကို-STORE စီပီယူ Software များ Intel က Server ကို စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ HTC က device ကိုမော်ဒယ် ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Sony Ericsson က Technology_Internet processor ​​ကို Samsung က နည်းပညာ HD Graphics Intel က Nokia က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု စမတ်ဖုန်းများ 64-နည်းနည်းက Windows ပရိုဆက်ဆာ Qualcomm မှ